Ifulethi eliluhlaza okwesibhakabhaka eli - I-Airbnb
Ifulethi eliluhlaza okwesibhakabhaka eli
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Andraž
Indlu yethu yomndeni itholakala enkabeni yedolobha lasePostojna (INDAWO ENKULU), ukuhamba imizuzu emi-2 kuphela ukuya esigcawini sedolobha elikhulu (isikwele sikaTito) kanye nokuhamba imizuzu eyi-10 ukuya emhumeni wasePostojna. Iseduze nesiteshi sebhasi, imakethe njll. Singakusiza ngokuhlela indawo yakho yokuhlala e-Postojna nase-Slovenia, ukuze ujabulele nakakhulu. Ifulethi elivuselelwe futhi elisanda kufakwa, elitholakala esitezi sokuqala liyisinqumo esingcono kakhulu semindeni namaqembu abantu abangafika kwabangu-7.
Indlu yethu eminyakeni engaphezu kuka-100 ubudala, yebo ivuselelwe ngokwesimanje. Ifulethi litholakala esitezi sokuqala. Ifulethi linakho konke okudingayo ukuze uhlale unethezekile: amakamelo okulala ama-2, ikhishi, igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela, i-balcony njll.
Indawo esihlala kuyo inobungane futhi iphephile. Sinobudlelwano obuhle nomakhelwane bethu. Naphezu kokuthi siphakathi kwedolobha, indawo ithule.
Njengababungazi, sizokunikeza lonke ulwazi oludingekayo nosizo. Noma yini oyidingayo, xhumana nathi.